ချန်ပီယံဘွဲ့ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးဝိုင်းထဲကို အောင်လအန်ဆန် ပြန်လာမယ်
အောက်တိုဘာလထဲမှာ ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်မယ့် အောင်လအန်ဆန် Aung La N Sang
24 Aug 2018 . 12:17 PM
နာမည်ကြီး MMA တိုက်ခိုက်ရေးသမား အောင်လအန်ဆန် Aung La N Sang ဟာ အခုနှစ် အောက်တိုဘာလထဲမှာ ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်သွားမယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ONE Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ် ၊ Light Heavyweight ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဒီသတင်းကို သူ့ရဲ့ Instagram ၊ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာ အတည်ပြုဖော်ပြခဲ့တာပါ။” မြန်မာ့စပါးအုံး” လို့ နာမည်ပြောင် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းက ONE: SPIRIT OF A WARRIOR ပြိုင်ပွဲမှာ မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံသား Hasegawa နဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး (၅)ချီအထိ ရေကုန်ရေခမ်း ထိုးသတ်ပြီးမှ အနိုင်ရခဲ့တယ်။
အဲဒီပွဲဟာ ONE Championship ပြိုင်ပွဲ သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တွေထဲမှာ တစ်ပွဲအပါအ၀င် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့် ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲကို အောက်တိုဘာ (၂၆)ရက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲထိုးသတ်မှာဖြစ်ပြီး အရင်(၄)ပွဲလိုပဲ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံ အားကစားကွင်းမှာ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်သလို အဲဒီပြိုင်ပွဲကို ONE: PURSUIT OF GREATNESS ဆိုတဲ့အမည် သတ်မှတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်က “ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်တစ်ပွဲအတွက် လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ချန်ပီယံ ခါးပတ်ထဲကတစ်ခုက အောက်တိုဘာလမှာ ပြိုင်ပွဲဆီကို ရောက်လာတော့မှာပါ။ ဒီချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အသင့်ရှိနေသလို အကောင်းဆုံး တင်ဆက်ဖို့အတွက်လည်း ကျွန်တော့်စွမ်းအားရှိသမျှပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုချစ်ခင်ပြီးအားပေးတဲ့အတွက်လည်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပြန်ဆုံရအောင်။
Contract is signed! One of my belt is going to be on the line in October. I’m training very hard. I’m hungry, super grateful for the opportunity and I can’t wait to put on amazing show! Thank you all for your love and support “ဆိုပြီး Facebook စာမျက်နှာမှာ Post တင်ခဲ့ပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရ်ှကို အနိုင်ယူပြီး မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံ၊ မာချာဒိုကို အနိုင်ယူပြီး Light Heavyweight ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူပါ။ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ MMA ကစားသမားဘ၀တစ်လျှေက် (၃၃)ပွဲထိုးသတ်ခဲ့ပြီး (၂၃)ပွဲနိုင်၊ (၁၀)ပွဲရှုံး မှတ်တမ်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
REF:Aung La Nsang(Burmese Python)Facebook,.onefc.com
Photo:Aung La Nsang(Burmese Python)Facebook,.onefc.com
အောကျတိုဘာလထဲမှာ ခနျြပီယံကာကှယျပှဲ ထိုးသတျမယျ့ အောငျလအနျဆနျ Aung La N Sang
နာမညျကွီး MMA တိုကျခိုကျရေးသမား အောငျလအနျဆနျ Aung La N Sang ဟာ အခုနှဈ အောကျတိုဘာလထဲမှာ ခနျြပီယံကာကှယျပှဲ ထိုးသတျသှားမယျလို့ အတညျပွုခဲ့ပါတယျ။ ONE Championship ပွိုငျပှဲရဲ့ မဈဒယျဝိတျ ၊ Light Heavyweight ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျဟာ ဒီသတငျးကို သူ့ရဲ့ Instagram ၊ Facebook စာမကျြနှာတှမှော အတညျပွုဖျောပွခဲ့တာပါ။” မွနျမာ့စပါးအုံး” လို့ နာမညျပွောငျ သတျမှတျခံထားရတဲ့ အောငျလအနျဆနျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဇှနျလတုနျးက ONE: SPIRIT OF A WARRIOR ပွိုငျပှဲမှာ မဈဒယျဝိတျခနျြပီယံ ကာကှယျပှဲအဖွဈ ဂပြနျနိုငျငံသား Hasegawa နဲ့ ထိုးသတျခဲ့ပွီး (၅)ခြီအထိ ရကေုနျရခေမျး ထိုးသတျပွီးမှ အနိုငျရခဲ့တယျ။
အဲဒီပှဲဟာ ONE Championship ပွိုငျပှဲ သမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးပှဲစဉျတှထေဲမှာ တဈပှဲအပါအဝငျ အဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ လာမယျ့ ခနျြပီယံကာကှယျပှဲကို အောကျတိုဘာ (၂၆)ရကျမှာ ယှဉျပွိုငျပှဲထိုးသတျမှာဖွဈပွီး အရငျ(၄)ပှဲလိုပဲ သုဝဏ်ဏမိုးလုံလလေုံ အားကစားကှငျးမှာ ဆကျလကျ ကငျြးပသှားမှာဖွဈသလို အဲဒီပွိုငျပှဲကို ONE: PURSUIT OF GREATNESS ဆိုတဲ့အမညျ သတျမှတျသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။ အောငျလအနျဆနျက “ကြှနျတေျာ့ရဲ့နောကျတဈပှဲအတှကျ လကျမှတျထိုးခဲ့ပါပွီ။ ကြှနျတေျာ့မှာရှိတဲ့ခနျြပီယံ ခါးပတျထဲကတဈခုက အောကျတိုဘာလမှာ ပွိုငျပှဲဆီကို ရောကျလာတော့မှာပါ။ ဒီခနျြပီယံခါးပတျကို ကာကှယျဖို့ အသငျ့ရှိနသေလို အကောငျးဆုံး တငျဆကျဖို့အတှကျလညျး ကြှနျတေျာ့စှမျးအားရှိသမြှပွငျဆငျထားပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြခငျပွီးအားပေးတဲ့အတှကျလညျး အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။မကွာခငျမှာပွနျဆုံရအောငျ။
Contract is signed! One of my belt is going to be on the line in October. I’m training very hard. I’m hungry, super grateful for the opportunity and I can’t wait to put on amazing show! Thank you all for your love and support “ဆိုပွီး Facebook စာမကျြနှာမှာ Post တငျခဲ့ပါတယျ။
အောငျလအနျဆနျဟာ ဗဈတာလီဘဈဒကျရျှကို အနိုငျယူပွီး မဈဒယျဝိတျခနျြပီယံ၊ မာခြာဒိုကို အနိုငျယူပွီး Light Heavyweight ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈခဲ့သူပါ။ အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ အောငျလအနျဆနျဟာ MMA ကစားသမားဘဝတဈလြှကျေ (၃၃)ပှဲထိုးသတျခဲ့ပွီး (၂၃)ပှဲနိုငျ၊ (၁၀)ပှဲရှုံး မှတျတမျး ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။